बागलुङमा आजदेखि मतगणना – Janamanch.com
बागलुङमा आजदेखि मतगणना
बागलुङ, २१ मंसिर– मंसिर १० गते सम्पन्न भएको मतदानको गणनाका लागि प्राविधिक र प्रकृयागत सबै तयारी भएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रकाशप्रसाद पंडितले मतगणनाको तयारीमा रहेको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले मतगणनाका लागि दोश्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुने बिहिवार साँझ ५ बजेपछि तोकेपछि कार्यालयले पनि सोही अनुसारको तयारी गरेको हो । मतगणनाका लागि फलामे तारले घेरा लगाएर जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सिसि क्यामेरा समेत जडान गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र भित्र दुई प्रदेशको एकएक स्थान र संघको २ स्थानमा गरी ४ स्थानमा मतगणना हुने प्राविधिक टिम तयार गरिएको हो । दुई निर्वाचन क्षेत्रको गणना गर्दा ८ स्थानमा हुने व्यवस्था छ ।
यसरी गन्दा ३ दिन भित्र सबै परिणाम आइसक्ने अनुमान गरिएको पंडितले बताए । प्रत्यक्षतर्फको परिणाम आएपछि मात्र समानुपातिकको मतगणना हुनेछ । मत गणनाका लागि १ सय २० जना कर्मचारीलाई खटाइएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तोकेका कर्मचारी प्रवेश गरेर मतगणना गर्ने र तार बाहिरबाट उमेदवारका प्रतिनिधिले हेर्ने व्यवस्था मिलाईएको हो ।
मतगणना स्थलमा सुरक्षा कडा पारिएको र आचारसंहिता बिपरितका कुनैपनि काम गर्नेलाई तत्कालै कारवाही गरिने उनले जानकारी दिए । बुधवार बसेको उमेदवार र दलका प्रतिनिधिको बैठकले मतगणनाका लागि आचार संहिता बनाएको छ । मंसिर १० गते सम्पन्न निर्वाचनमा बागलुङको क्षेत्र नं. १ मा ५६ हजार ६ सय ७ र क्षेत्र नं. २ मा ५३ हजार ७ सय ५९ मत खसेको थियो । जिल्लामा १ लाख ६७ हजार २ सय ८२ मतदाता छन् । १ सय ९९ मतदान केन्द्रका ५ सय ९७ मतपेटिकाको मत गणना गर्नुपर्नेछ । मतदानको दिन देखि मतपेटिका राखेका कोठामा कांग्रेस,एमाले, माओवादी र राष्ट्रय जनमोर्चा लगायतले छुट्टछाछुट्टै चावी लगाएका छन् । निर्वाचन कार्यालयको पनि छुट्टै चावी छ । उक्त दिनदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले पालो गरेर मतपेटिका राखेको बाहिरी स्थानमा कुरेर पनि बसेका छन् । दिउसोको समयमा महिला र रातको समयमा पुरुषहरुले कुर्दै आएका हुन् ।
मतगणना स्थलमा पुग्नका लागि पत्रकार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र अन्य अनुमति प्राप्त निकायलाई समेत मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जारी गरेको पास लिएर मात्र जान पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै उक्त पास भएर पनि सबै जना एकैपटक गएर भीडभाड गर्न भने नपाउने व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायलाई जिम्मा दिएको पंडितले जानकारी दिए । ‘मतगणनाको थालनी गर्ने समयमा फोटो र भिडियो लिनका लागि सबै पत्रकारलाई प्रवेश दिएपनि त्यसपछि भने पालो मिलाएर प्रवेश दिने व्यवस्था छ’ पंडितले भने । यसैबीच गत साता ३ स्थानमा पुन मतदानको माग गर्दै परेको उजुरीको छिनोफानो नभएपनि मतगणनाको तयारी शुरु भएको छ । गत साता कांग्रेसले धुल्लुबास्कोट, पैयुूथन्थाप र भकुण्डेमा बाम गठबन्धनले बुथ कब्जा गरेर कांग्रेसका कार्यकर्तालाई मतदनन गर्न नदिएको भन्दै उजुरी गरेको थियो । ती स्थानमा कांग्रेसले पुन मतदानको व्यवस्थाको माग गरेको थियो । कांग्रेस सभापति तथा क्षेत्र नं. १ क का उमेदवार दिपेन्द्रबहादुर थापा र १ ख का उमेदवार प्रकाश शर्मा पौडेलले उजुरी दर्ता गरेका थिए । ‘उजुरी र मतदान अधिकृतको राय सहित लेखेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाएका थियौं’ पंडितले भने, ‘निष्कर्ष केही नआएकोले मतगणनाको तयारी गरेका हौं ।’ मतगणना भएपनि बिशेष अदालतमा गएर उजुरी गरेमा कानूनी उपचार मिल्ने भएकोले निर्वाचन कार्यालयले गणनाको तयारी गरेको हो ।